(ဂါးဒီယန်းဦးစိန်ဝင်း မှ ပြန်ညွှန်းထားသည်)
↑ ချစ်ကြည်ရေး ကြည်ညွှန့် (၁၉၇၁ ခုနှစ် ဩဂုတ်). သတင်းစာ ဆရာကြီးများ၏ သူတို့ဘဝအတွေ့အကြုံ. တံတျာစာပေ။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=စိန်ဝင်း၊_ဂါဒီယန်&oldid=517339" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၂၈ မေ ၂၀၂၀၊ ၀၇:၅၅ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။